News | Barcelona
News | Tag: Barcelona
बार्सिलोना घरेलु लिगको उपाधि नजिक, आजै च्याम्पियन बन्नसक्ने
एजेन्सी । बार्सिलोना स्पेनिस घरेलु लिग ला लिगाको उपाधि नजिक पुगेको छ । मंगलबार राति सम्पन्न खेलमा आलाभेजलाई उसैको घरेलु मैदानमा २–० गोलले पराजित गर्दै बार्सिलोना उपाधि नजिक पुगेको हो ।
बार्सिलोनालाई पराजित गर्न सक्ला त लिभरपुललेः के भन्छन् समिक्षकहरु ?
एजेन्सी । पुर्व म्यानचेस्टर युनाइटेडका खेलाडी रियो फण्र्डिनाण्डले यस सिजन इंलिस क्लबले च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्ने अनुमान गरेका छन् । यस सिजन प्रिमियर लिगमा दुई क्लब लिभरपुल र टोटनहमले च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेका छन् ।
बार्सिलोनासँग म्यान्चेस्टर युनाइटेडको केही सीप चलेन
काठमाडौँ । बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ । मंगलबार राति सम्पन्न खेलमा बार्सिलोनाले इंग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई ३–० गोलले (समग्रमा ४–०) गोलले पराजित गरेसँगै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो ।
के म्यान्चेस्टर युनाइटेडले बार्सिलोनालाई उसैको घरेलु मैदानमा पछार्न सक्ला ? (प्रिभ्यू)
काठमाडौँ । च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलको पहिलो लेग अन्तर्गत आज स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले इंग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडको सामना गर्दैछ । यसअघि वल्र्ड ट्राफोडमा भएको खेलमा बार्सिलोना १–० गोलले अघि रहेको थियो । बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नाउमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति पौने १ बजे सुरु हुनेछ ।
स्टार खेलाडीलाई आराम दिँदा बार्सिलोनाले ह्वेस्कासँग बराबरी खेल्यो
काठमाडौँ । स्पेनिस घरेलु लिग ला लिगाको शीर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोनाले रेलिगेशन जोनमा रहेको ह्वेस्कासँग गोलरहित बराबरी खेलेको छ । शनिबार राति ह्वेस्काको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा बार्सिलोनाले आफ्ना सम्पूर्ण स्टार खेलाडीहरुलाई आराम दिएर दोस्रो रोजाइ र बार्सिलोना बी टिमका खेलाडीहरुलाई खेल्ने अवसर दिएको थियो ।
स्मलिङको क्रुर ट्याकलले रगताम्मे भएका मेसीले ह्वेस्काविरुद्धको खेल गुमाउने !
एजेन्सी । बार्सिलोनाका स्टार फरवार्ड लियोनल मेसीले ला लिगा अन्तर्गतका आगामी खेल गुमाउने भएका छन् । बुधबार राति वल्र्ड ट्राफोडमा सम्पन्न च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलको पहिलो लेगमा मेसीविरुद्ध म्यान्चेस्टर युनाइटेडका खेलाडी क्रिस्ट स्मलिङले ट्याकल गर्दा मेसीको नाकबाट रगत बगेको थियो ।
के घरेलु मैदानमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले बार्सिलोनालाई रोक्ला ? (प्रिभ्यू)
काठमाडौँ । च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलको पहिलो लेग अन्तर्गत आज इंग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडविरुद्ध स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । म्यान्चेस्टर युनाइटेडको घरेलु मैदान वल्र्ड ट्राफोडमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति पौने १ बजे सुरु हुनेछ ।
अन्तिम तीन मिनेटमा मेसी र स्वारेजले गोल गरेपछि बार्सिलोनाका हार टर्‍यो
काठमाडौँ । उत्कृष्ट कमब्याक गर्दै बार्सिलोना घरेलु लिग ला लिगामा हारबाट जोगिएको छ । मंगलबार राति भिलारियलको घरेलु मैदान सेरामिका रंगशालामा भएको खेलको अन्तिम समयमा लियोनल मेसी र लुइस स्वारेजले उत्कृष्ट गोल गरेपछि बार्सिलोना हारबाट जोगिएको हो ।
बार्सिलोनालाई च्याम्पियन्स लिगमा पराजित हुने त्रास (प्रिभ्यू)
काठमाडाैँ । आज च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत दुई खेलहरु हुँदैछ । क्वार्टरफाइनलको लागि हुने खेलमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाविरुद्ध फ्रान्सेली क्लब लियोन भिड्दैछ भने जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखविरुद्ध इंग्लिस क्लब लिभरपुल खेल्दैछ । च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ को दोस्रो लेगमा केही अप्रत्यासित नतिजा निक्लिरहेको अवस्थामा आजको खेलबाट को अघि बढ्छ भन्ने टुंगो लाग्छ ।
बार्सिलोनालाई हराउँदै जिरोनाले जित्यो क्याटालान सुपरकपको उपाधि
Catalan super cup
एजेन्सी । बार्सिलोना क्याटालान सुपर कपको उपाधि जित्नबाट चुकेको छ । बुधबार राति नोभा क्वेरा अल्टा रंगशालामा जिरोनासँग भएको खेलमा बार्सिलोना १–० गोलले पराजित हुँदै उपाधि जित्नबाट चुकेको हो ।